Sakata's Content - Page 2 - Somali Forum - Somalia Online
Everything posted by Sakata
U.S. recognition of Somalia govt creates political storm in Somaliland
Sakata replied to Fiqikhayre's topic in Politics
Somalia;912105 wrote: Our thoughts are with the people of Somaliland, who are going through a difficult time in their brief history. indeed.....
Sakata replied to Sakata's topic in General
Sakata posted a topic in General
Xulka kubadda Kolayga ee wiilasha Soomaaliya, ayaa caawa 98-80 kaga badiyay xulka Burundi kulankii labaad ee ka tirsanaa qeybta B ee tartanka isreeb-reebka koobka qaramada Africa ee kubadda Kolayga (Basket-Ball). Guusha Soomaaliya ee caawa ayaa ka dhigan in ay u gudbaan Semi Finalka kadib markii shalay ay 81-78 uga badiyeen Kenya. Semi finalka ayay Soomaaliya la ciyaari doontaa xulka Rwanda oo kaalinta labaad kaga soo baxay qeybta A, halka Kenya oo qeybta B kaga soo baxday kaalinta labaad ay la ciyaari doonto Masar. Kulamada Semi finalka ayaa dhici doona Jimcada oo ay taariikhda ku beegan tahay 25-ka January. Macallinka Xulka Cumar Baarajab iyo kabtanka Xulka qaranka Yuusuf Qaafow oo Barkulan la hadlay ciyaarta kadib ayaa waxa ay sheegeen in ay rajo wanaagsan ka qabaan in tartankan ay ku guuleystaan oo ay noqdaan horyaalka Zone 5. Tartankan ayaa u dhaxeeya dalalka la isku yiraahdo Zone 5 oo ah 7 dal, xulkii ku guuleysta ayaa ka qeyb gali doona koobka Qaramada Africa ee kubadda Kolayga ee bisha August ee sanadkan ka dhici doona dalka Ivory Coast Somali Roster in Tanzania 1. Faisal Aden (Texas Legends) 2. Abdi Faras (Barstow Community College) 3. Mohammed Abukar (208-F-85, college: San Diego St.) (Lukoil Akademik Sofia) 4. Munye Sufi Haydar (Ohio State - Marion) 5. Osman Abdirahman 6. Osman Mohamed (Guelph College) 7. Hussein Mahdi 8. Liban Hassan (Centennial College) 9. Hoessein Addow (205-F-70, agency: R.H.Consultancy) (Rotterdam Challengers) 10. Yusuf Qaafow (190-G-87) (Melbourne Giants) 11. Abdi Mohamed (Yakima Valley Community College) 12. Mohmed Ali
Garrissa Mayor Arrives in Puntland
Sakata replied to Mooge's topic in Politics
PICTURE: Somalia's defense minister parties while qoslaye spends time flying abroad
Quran verse: Greatest expression for Justice
Sakata replied to BiLaaL's topic in General
Kudos Mashallah BiLaaL, I feel like alot of the members should be reading this....May Allah Bless Our country and the uMMah as whole with peace....
Gudi heer Wasiiro ah oo loo Xilsaaray in ay Baaraan Xasuuqii Leego
Sakata replied to Abwaan's topic in Politics
I heard indhacade went out of business after the dismantled all his isbaros...
Ahmed Dogan Assassination Attempt (Video)
Sakata replied to Jacpher's topic in Politics
Nin sigtay manoolo...
Sakata replied to Somalia's topic in Politics
President Hassan Sheikh Meets With President Obama (Pictures)
Puntland youth oppose Mogadishu based Somalia Olympic group
Sakata replied to Saalax's topic in Politics
This is a useless body anyways we haven't seen them produce any results beside selling the visas for asylum ....
A third way for Somaliland and Somalia
Sakata replied to Alpha Blondy's topic in Politics
Somali President in MNPLS
Sakata replied to Che -Guevara's topic in Politics
Somalia took a major forward step..and it'll not go back to chaos and tribalism..only illiterate and ignorance people want to keep us what made us behind for the last 22 years, clearly talked about the JUBA and clearly stated what was the facts...support or not support..He's the official president of Somalia.
^^Odayga looks like homeless....somali maahan qof qabyaalad banaanka cold weather ka la is taagey iyo xumaan ka talis I don't see why dmn Minnesota cold weather loo taagan yahay///
Here are the so called demonstrators
Also the live stream is working now http://www.ustream.tv/channel/somalimaitv
We need a live feed, por favor.....
Thats the washington event, is there live from mnpls...
Mudaharaad ka Dhan ah Madaxweyne Xassan SH oo Qabanqaabadiisa Minnesota ka socda
Sakata posted a topic in Politics
Xuquuqda Qoraalada, sawirada iyo warbixin kasta waxay gaar u tahay Raxanreeb.com (RBC Radio). Lama adeegsan karo, dib looma daabici karo, lama baahin karo ama kambayuutar laguma keydsan karo si toos ah iyo si dadban intuba, haddii aan fasax laga heysan maamulka Raxanreeb.com (RBC Radio). Fadlan hana xadin Waxaa magaalada Minneapolis kusii wajahan Madaxweynaha Soomaaliya Xassan SH Maxamuud wafdi uu hogaaminayo oo ay kamid yihiin Wasiirada arimaha dibada Soomaaliya Fowsiya Xaaji Adan iyo Wasiirka Warfaafinta ee Soomaaliya Cabdullahi Ciilmooge. Madaxweyne Xassan SH ayaa jaaliyada Soomaalida ee Gobolka Minnesota la hadli doona fiidnimada Jimcaha. Soo dhaweynta Madaxweynaha waxaa iyana hareer socda Mudaharaad looga soo horjeeda. Gudiga qabanqaabada Mudaharaadka looga soo horjedo madaxweyne Xassan oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegeen inay sababta ay uga gol leeyihiin mudaharaadka ay tahay sida ay u suluugsan yihiin faragalinta Dastuurka, Maamul Goboleedyada. Cismaan Axmad SH oo kamid ah gudiga ayaa waxa uu yiri. “…..waxaa muuqata in madaxweynuhu uu dhinac maray dastuurkii isaga lagu soo doortay faragalin badan in uu ku hayo maamuladii ama uu damacsan yahay ama uu damacsan yahay in uu carqaladeeyo” Cismaan isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri. “……hadaynu nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minneasota kuwii ka badbaaday dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya waxaan cabsi ka qabnaa Soomaaliya in dib ugu noqoto dagaaladii sokeeye…” Jaaliyada Soomaalida ee Gobolka Minnesota ayaa ah mid balaaran saameyna ku dhex leh Gobolka waxaana muuqata in ay ku kala qeybsan yihiin siyaasada Madaxweyne Xassan.
Oba Hiloowlow '' I do not support unuka leh anymore''
Sakata replied to oba hiloowlow's topic in Politics
Failed French! (France confirms failed Somali hostage rescue)
Sakata replied to SayidSomal's topic in General
Subhanallah, i cant believe some are sending the condolences to the french rather then the innocent somalis who are butchered by these so called special ops...
Somaaliya ha jirto, ha joogto, ha midowdo Wasiirada arimaha dabada Soomaliya Fawsiya Yuusuf Xaji
Sakata replied to Aaliyyah's topic in Politics
Lala land I guess qofta waa in tolka lagasaaro.....